Umatshini wokuhambisa umoya webhasi abavelisi kunye nabanikezeli - China umatshini womoya webhasi mveliso
Uchungechunge lwe-SZR luhlobo lophahla oluphezulu lweyunithi yomoya ye-8.5m ukuya kwi-12.9m ukusuka phakathi ukuya esiphelweni sebhasi eqhelekileyo, umqeqeshi, ibhasi yesikolo okanye ibhasi echaziweyo. Umthamo wokupholisa uthotho lwesixhobo sokupholisa ibhasi sisusela kwi-20kW ukuya kuma-40kW, (62840 ukuya 136480 Btu / h okanye ngo-17200 ukuya ku-34400 Kcal / h). Ngokubhekisa kwisibulali-moya seminibhasi okanye ibhasi engaphantsi kwe-8.5m, nceda ujonge kuthotho lwe-SZG.
Uthotho lwe-SZQ luhlobo lophahla oluphezulu lweyunithi yomoya ye-8.5m ukuya kwi-12.9m ukusuka kuqoqosho oluqhelekileyo ibhasi, umqeqeshi, ibhasi yesikolo okanye ibhasi echaziweyo. Uthotho olunobushushu obuphezulu luyafumaneka. Umthamo wokupholisa uthotho lwesixhobo sokupholisa ibhasi sisusela kwi-20kW ukuya kuma-40kW, (62840 ukuya 136480 Btu / h okanye ngo-17200 ukuya ku-34400 Kcal / h). Ngokubhekisa kwisibulali-moya seminibhasi okanye ibhasi engaphantsi kwe-8.5m, nceda ujonge kuthotho lwe-SZG.
SZG series luhlobo kophahla imvelaphi inyuselwa air conditioner. Isebenza kwi-bus ye-6-8.4m yedolophu kunye ne-5-8.9m yebhasi yabakhenkethi. Ukuze ube noluhlu olubanzi kakhulu lokusetyenziswa kweemodeli zebhasi, zimbini iintlobo zobubanzi boluhlu lwe-SZG, ngo-1826mm no-1640 ngokwahlukeneyo.
Ukucocwa komoya kwe-SONGZ kunye nenkqubo yokubulala iintsholongwane luhlobo lwesixhobo sokubulala intsholongwane, esinomsebenzi we-antivirus, sterilizer, VOC filter kunye nefayile ye-PM2.5.
Imveliso iquka icompressor, condenser, icebo lokucoca ulwelo elomileyo, ivalve yokwandisa, i-evaporator, imibhobho kunye nezinto zombane.
Iimveliso zahlulwe zangamabakala aliqela ngokweemodeli ezahlukeneyo kunye nobungakanani beeyunithi ezihambelanayo. Ngokwesakhiwo, zahlulwe ikakhulu kudidi lokudibanisa kunye nohlobo lokwahlulahlula.
Ukuphendula kubizo lwelizwe ukusukela ngo-2014 ukuza kuthi ga ngoku, i-China ikwenze olunye uhlengahlengiso kwisibandisi somoya esinyuse umva ngexesha lokuqala, sisebenzisa itekhnoloji yomoya opholisa umoya ngokuthe kratya kwimeko yethu yokubuyisela umva, kwaye iphuhlise iintlobo ezahlukeneyo zezakhiwo Iimveliso ukuhlangabezana neemfuno zentengiso.